Akwado Android os: 4.0 na elu
Site mbụ anya ị pụrụ ịhụ na nke a bụ professionally mere ngwa. Main ihuenyo nke ngwa na-ekewa na iche iche iji nye ọrụ ozi ọzọ banyere ugbu a data ojiji ala. N'elu ị pụrụ ịhụ a mmanya, nke-enye gị iji họrọ n'etiti dị iche iche data ojiji isi mmalite. E nwere ndị dị otú ahụ nhọrọ dị ka Mobile, na-agagharị, Wi-Fi na All. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ Wi-Fi taabụ ị ga-ahụ niile ego nke data nke e zitere ma ọ bụ natara site Wi-Fi njikọ.
N'okpuru ebe a na mmanya My Data e sere ese m nsogbu. Ọ na-anọchi anya graphically ụbọchị nile / izu / ọnwa ojiji nke data na kpọmkwem udi. Etiti oge ị nwere ike ịtọ na nhọrọ ma ọ bụ pịa bọtịnụ nso logo. Ọzọkwa My Data Manager na-enye gị na ndepụta nke ngwa ọdịnala na-eri data ọ bụla udi. Ị nwere ike ijikwa-egosipụta nke ndepụta site n'ịhọrọ Time ma ọ bụ Data nhọrọ. Ị pụrụ ịhụ ọ bụrụ na ị arapara gị atụmatụ ma ọ bụ na-eji "Ugbu A atụmatụ ojiji igbe bụ". Ebe i nwere ike ịhụ gị data ojiji atụmatụ, ịgba na otú ọtụtụ data ị ekwe na-eji na-eme n'ọdịnihu.
Site na ịpị menu ihe ị ga-ahụ abụọ nhọrọ "Ziga anyị nzaghachi" na "Mwube".
Ntọala panel mejupụtara anọ na taabụ: "General Ntọala", "Data Plan Ntọala", "na nkwado ma weghachite", "Banyere". Ke ofụri ofụri ntọala ị nwere ike ike na ma ọ bụ ike anya dị otú ahụ nhọrọ: persistent Ịma Ọkwa, na-egosi na akara ngosi na ọnọdụ mmanya, akụkọ (anonymously akọ ojiji ọnụ ọgụgụ ka mmepe), na-egosipụta ozi na nhọrọ aka data oge ọ bụla ngwa na meghere mgbe ahụ data bụ nwere nkwarụ.
Ka a ọhụrụ data ojiji atụmatụ ma ọ bụ jikwaa ẹdude otu ị kwesịrị ị na pịa "Data Plan Ntọala" taabụ. Mgbe ahụ ị ga-ahụ a data atụmatụ nhọrọ maka ọ bụla Atiya: Mobile, na-agagharị, ma ọ bụ Wi-Fi data atụmatụ. Ebe a ị nwere ike ịtọ atụmatụ ụdị (setịpụrụ ego nke kwere data-eri, oge na ụdị atụmatụ) na alerts. My Data Manager nwere ike igosi na anya oge ọ bụla mgbe ị na ruru a kpọmkwem akara nke data oriri ma ọ bụ a kwa ụbọchị anya.
Iji weghachite ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara gị ẹdude data ojiji atụmatụ ị nwere ike iji "na nkwado ma weghachite" taabụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ụfọdụ ma ọ bụ na ị chọrọ ịmata ụfọdụ ọmụma bụ isi banyere omume nhọrọ "Ihe" taabụ bụ a ụzọ ziri ezi.
Onye ọrụ Overview
Dị ka m na nke a omume bụ bara uru n'ihi na ụdị onye ọrụ. N'agbanyeghị onye ọrụ bụ gị Nne nne ma ọ bụ oyi Android Mmepụta, onye obula ga-ahụ ihe mara mma na ya. N'ihi na m na onye ọrụ interface e mere nke ọma na ị na-kacha nke ọmụma si na ihuenyo. Ọzọkwa ntọala panel bụ nnọọ ala na mfe nghọta, n'ihi ya m na-enye a usoro ndị kasị elu akara kwere omume.
Top 5 Alternative égwu jikwaa Data
Ma e wezụga "My Data Manager" e nwere ọtụtụ nke yiri mmemme, nke pụrụ inyere gị aka jikwaa gị data ojiji. N'okpuru ebe m gwa a obere ndepụta ha na ike n'akụkụ.
Data ojiji 508 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sigterm 4/5
Data NA-Gbanyụọ 238 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=it.miabit.android.dataonoff 3/5
Data counter wijetị 281 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roysolberg.android.datacounter 4/5
Onavo Gụọ | Data ojiji 1 925 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onavo.android.onavoid 4/5
Onavo ịgbatị | Data Savings 1 495 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onavo.android.onavoics 4/5
Jụụ ngwa n'ihi na ndị na-amasị minimalism na ihe niile dị ndụ ha. Onyeōzi ọrụ interface daa ogbenye mgbe ahụ na "My Data Manager", ma ike igbo ị na ya ọrụ. "Data ojiji 'nwere ihe abụọ data eji atụmatụ: cellular na Wi-Fi. N'ihi na ọ bụla atụmatụ ị nwere ike ezipụta karịa ego nke data na oge nke oge maka ya ma ọ bụ ka na-akparaghị ókè. Ọ bụla atụmatụ nwere ya window ebe ị pụrụ ịhụ iwesa data taa na n'izu a, ezigbo ojiji n'ihi na ugbu a data ojiji atụmatụ na ojiji ọnọdụ. Ọzọkwa "Data ojiji" na-agụnye ihe anya usoro. Ị nwere atọ alerts na i kwesịrị ịtọ mgbe ọ ga-egosi. Site na ndabara ụkpụrụ na-50%, 75%, 90% nke data ịgba. Tụkwasị na nke ahụ ndị dị otú ahụ nhọrọ: gbanyụọ Wi-Fi mgbe ịgba na-ruru, na igba egbe show, ọganihu mmanya agba nhọrọ, na data ngosi unit. Ọzọ mma bụ a akụkọ ihe mere eme nhọrọ. Ebe i nwere ike ịchọta a eserese nke data eji na ndepụta nke data iwesa kwa ụbọchị.
Ọ bụ ukwuu n'ime wijetị, ma ọ bụghị ngwa. Ndị isi uru bụ obere animated nkuzi na mmalite-elu. Ọ na-agwa gị otú ị nwee wijetị. Ọzọkwa onye ọrụ nwere ike ahụ ndị ọzọ na taabụ: "Mwube", "Style" na "History". Ntọala taabụ nwere ogbenye set nke ọrụ - enyere Ịma Ọkwa (ma ọ bụrụ ọzọ ngwa agbanwe data ojiji nhazi Data NA-Gbanyụọ eziga a ngosi) na batrị ntọala (mgbe akpaaka-gbanyụọ data). Ke "Style" taabụ ị nwere ike họrọ ịke nke icon si atọ wuru na-ekwekọghị. Ikpeazụ na-egosi na ndepụta nke rụrụ arụmọrụ.
Nzube nke ngwa dị nnọọ mfe. Ọ na-ekwe onye ọrụ ka ịgbanwee on / agbanyụ 3G / 4G njikọ ke kiet ke otu click on wijetị akara ngosi.
Data counter wijetị
Ọzọ wijetị na obere FAQ na ngwa mmalite-elu. Wijetị icon enye ọrụ na ọmụma banyere ego nke ji data. Ma mụ onwe m, ọ bụ nnọọ bara uru. Site na ịpị wijetị icon a ọhụrụ nhọrọ menu ka egosiri. Ebe i nwere ike na-aga "Statistics taabụ", nke na-enye gị ọnụ ọgụgụ nke data eziga / natara maka ndị dị otú ahụ oge: ọnwa, izu, ụbọchị na ngụkọta. Ọzọkwa ị nwere ike hazi ọdịdị nke wijetị (setịpụrụ mgbada agba, ndabere agba, ịke, oge na-adịru, ume ọnụego na wdg), ụfọdụ global ntọala na kwekọọ inye iji PayPal ma ọ bụ ịzụta "Data counter wijetị Pro". Isi pro bụ ya conciseness, ma dị mwute ikwu ọrụ na onyeōzi ọrụ interface na-adịghị n'elu.
Onavo Gụọ | Data ojiji
Otu ngwa na-eji soro mobile data ojiji. Onyeōzi ọrụ interface dị ebube ma ọ enwereghị arụmọrụ. Na ndị ọzọ okwu ngwa adịghị naanị mkpa ọrụ. N'elu isi ihuenyo anyị pụrụ ịhụ a na-enwe ọganihu mmanya, nke na-akọwa ego nke data na-eji. Dị ka ọ bụla ngwa ị nwere ike ezipụta etiti oge. Site na ndabara ọ na-atọrọ ka kwa ụbọchị. Ọzọkwa ị pụrụ aga "App nche" taabụ na-ekiri ugbu a data ewe ngwa. Ọzọ nhọrọ bụ na-a Data atụmatụ ndụmọdụ ma ọ bụ na-ahụ ojiji profaịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikere òkè results i nwere ike ime ya site na "Share nhọrọ".
Onavo ịgbatị | Data Savings
Jụụ ngwa na ike esereese nkwado maka ọ bụla ọnụ ọgụgụ akụkụ. Ị pụrụ ịhụ dịgasị iche iche nke ihe osise maka oge ọ bụla ị kpọmkwem na ntọala. Ke adianade do ị nwere ike ịtọ dị otú ahụ nhọrọ na ntọala: jikwaa cache ọcha, setịpụrụ oyiyi mma, ọnụego ngwa na Google Play, na-agụ FAQ, ele enyemaka na kọntaktị na nkwado. Ngwa nwere òkè usoro ịkọrọ results site mmadụ netwọk.
Main ọrụ nke ngwa bụ iji belata gị na-agagharị okporo ụzọ. Onavo ịgbatị caches gị niile na-agagharị data ma na-echekwa ya na Onavo sava, otú ị na-adịghị mkpa Ibu Ibu otu ihe oyiyi, ọkọlọtọ, mgbasa ozi mgbe ahụ ị gara a webpage, nke ị gara n'ihu. Ọzọkwa ọ na-enye ụfọdụ njikarịcha ka 3G na 4G njikọ mgbe ị na-ezipụ oyiyi na Njikwa ị na-agagharị data arapara data ojiji atụmatụ.
Jiri MobileGo jikwaa Android data ngwa
Ọzọ jụụ ngwa jikwaa gị data ego, bụ MobileGo. Isi ebumnuche nke ngwa bụ na adị arụmọrụ nke ekwentị mkpanaaka gị. App na-arụ ọrụ na onye ọrụ omume, usoro omume ma na-enye kacha usability na-egwu egwu egwuregwu.
Agbake data ego site na-emechi enweghị isi ngwa.
Iji mee nke ahụ ụdị ihe ị kwesịrị ị na pịa "Pịa maka nkọwa" button ịhụ ihe niile ngwa, na ike ga-emechi enweghị ịghọgbu gị usoro.
Mgbe na-ahọrọ ngwa, ị chọrọ imechi ma ọ bụ pịa "Mechie All" button. Ọ bụrụ na ime otú ahụ, ngwa ga-emechi niile ngwa ọdịnala nke bụ omume na-emechi. Ị ga-ahụ na ihuenyo n'okpuru.
Alternative ụzọ bụ pịa na "bust" button na ala nke ihuenyo na ngwa ga-emechi na-ebuli niile apps kwere omume.
MobileGo nwekwara optimizes egwuregwu niile i nwere na gị smart ekwentị. Iji mee ka a na ime ị dị nnọọ mkpa pịa "Họrọ egwuregwu mbo mbuli" nhọrọ (akara red na screenshot n'okpuru) ma họrọ egwuregwu site na listi. Na m atụ ọ bụ a "Hill ọrịrị" egwuregwu. Ọzọkwa ị pụrụ tinye ha aka. Mgbe arụọ click "enyem" button dị ka mgbe niile mbo mbuli ị egwuregwu ahụmahụ na smartphone.
Boosting ị igwefoto, Internet njikọ na media
Ọ bụrụ na ị chọrọ mbo mbuli gị igwefoto, njikọ Ịntanetị ma ọ bụ media, MobileGo ga-eme ya n'ihi na ị na ole na ole dị mfe nzọụkwụ. Nke mbụ niile mkpa ka ị na-ahọrọ a menu button, nke na nsogbu na nri si "Họrọ egwuregwu mbo mbuli" nhọrọ. Mgbe ịpị na menu button, MobileGo ka ị na-ahọrọ ụdị njikarịcha.
Na m atụ m ga-pịa "Media enyem" nhọrọ. Mgbe ahụ edinam ngwa-enyocha kwa maka ngwa niile, nke na-emeso media na ekwentị gị. Ọ bụrụ na ọ can`t chọta ọ bụla n'ime ha na-akpaghị aka ọ jụrụ onye ọrụ na-tinye ha aka. Nzọụkwụ ọzọ bụ yiri ndị ọzọ - họrọ ngwa mbo mbuli ma ọ bụ mbo mbuli nile site na ịpị "enyem niile" bọtịnụ.
Ma e wezụga na ị nwere ike ịtọ MobileGo dị ka ị chọrọ. Ntọala panel-enye gị ohere jikwaa egosi arụmọrụ egosi, ncheta, imelite ngwa na-agụ "Banyere" taabụ iji chọta azịza na gị ajụjụ. Ọ bụrụ na-amasị gị na ngwa, dị nnọọ pịa "Dịruru anyị" button inye a akara a magburu onwe ngwa. Dị ka ọgwụgwụ, m nwere ike ikwu a ngwa maka onye ọ bụla.
Top 5 Free Antivirus maka Android égwu ka Download
Top 5 Android Software ka Download
Olee otú ndabere Ibe edokwubara na android ekwentị mfe
Best 5 HTC mmekọrịta Manager Alternatives
Olee otú Naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si HTC Ọchịchọ
Olee otú Download Free Songs si Google Music
Otú e si etinye Video ka akporo ekwentị - Motorola Droid / HTC dike
> Resource> Android> Top 6 Android Data Manager na-esochi nke Data ojiji